Itekhnoloji ayicothisi kancinci ... kwiFlop! | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 28, 2015 NgoLwesine, Meyi 28, 2015 Douglas Karr
UGordon E. Moore wayengumseki-mbumba we-Intel kunye ne-Fairchild Semiconductor owabhala iphepha kwiminyaka engama-50 eyadlulayo eyaqikelela ukuphindeka kwenani lezinto kwisekethe nganye edityanisiweyo minyaka le. Kwiminyaka eli-10 kamva, ngo-1975, wahlaziya uqikelelo kuyo yonke iminyaka emi-2… kwaye ukuxela kwangaphambili kwakhe bekuchanekileyo ngokuchanekileyo. Ngoku yaziwa njenge UMthetho kaMorey.
Ukubonelela ngomzekelo, ifayile ye- Apple Watch (endinayo ngovuyo kwaye ndiyincoma kakhulu) inegunya lokuqhubekeka malunga nee-smartphones ze-2 ze-iPhone 4. Iyigqwesa kude ikhompuyutha ka-1985 yeCray-2… esihlahleni sakho. Yiyo kanye loo nto inikwe umkhondo wonyawo lwesixhobo sonke kwaye kunzima ukuba ndicinge nokuba uGordon Moore ucinga ukuba sizakuba kule ndawo sikuyo namhlanje.
Iichips zekhompyuter ziyaqhubeka nokwandisa ukusebenza ngelixa zinciphisa ubungakanani, ukuvumela izinto ezintsha ezinokuthi iinjineli zingacingi ukuba zinokwenzeka. Kwiminyaka engama-40 eyadlulayo, uninzi lwabantu lwalungakholelwa ukuba kungekudala siza kuba nokufikelela kulwazi olungenamda kwisandla sakho.
Ithetha ntoni le nto kubathengisi? I-IMO, oko kuthetha ukuba sikwizigaba zokuqala zento enokufezekiswa ngokuthengisa kunye nokuthengisa kwangaphambili. Namhlanje kubahlalutyi Iiplatifti zinobuhle - zifaka iitoni zedatha kwaye zibonelela ngokulula. Iinkqubo ezinkulu zedatha ziyaqhubela phambili ukuqhubela phambili kumzi mveliso wentengiso ukuqhubela phambili iinkqubo zokunika ingxelo kwiinjini zokuxela kwangaphambili-eziya kuphucula amava omsebenzisi kunye neziphumo zentengiso.
Ukucwangciswa kwamandla kubalulekile kuba izixhobo zokuphuhlisa kula maqonga angenamda ziba lula kwaye kube lula ukuzenza. Umzekelo omnye, okanye ikhosi, ziinjini ezinkulu zedatha yedatha. Ngokuphuhlisa idatha yokuzilungiselela ngokwakho kunye neenjini zokubuza, iinkampani zinokutyhala izixhobo zophuhliso ekwakheni amanqaku amatsha- hayi ukulungisa kunye nokwenza ugcino lwedatha ukuze lusebenze ngokukuko. La ngamaxesha amnandi!
tags: moores umthethoamandla okucoca